4 taan meel hadaad faraha ka galiso kacsi la ooyneysaa - iftineducation.com
iftineducation.com – Waa wax la oogsan yahay in haddii tiirarka dhisamaha yihiin kuwo xooggan aad u wanaagsan in dhismahaas uu gaarayo muddo sanado badan isla markaana uu iska difaacayo wax waliba oo bur burin kara .
Sidaas oo kale ayay shumis.net ku leedahay xariirka dadweynahana waa sidaas haddii loo sameeyo tiirar xooggan iyo difaacyo wanaagsan dhab ahaan xariirkaas waxa uu noqonayaa mid caafimaad qaba oo guuleysta , ayna sii dheer tahay in labada dhinac ay ku noolaanayaan farxad ayna ka hor tagi karaan dhibaatooyinka daweynaha uga imaanaya ee ka dhanka ah xariirkooda . Waxa aya bahda shumis.net warbixintaan ku soo koobayaan tiirarka iyo difaacyada xariirka guuleysta ee il gaar ah isaga yeelo aqriste .
2- Kalsooni : suura gal ma aha in qof lala dhiso xariir guul ah haddii aysan jirin kalsooni la is weydaarsanayo labada dhinac , haddii xariirka yahay mid ay ka maqan tahay kalsoonida kuna dhisan shaki waxa uu noqonayaa xariir laga niyad jabo oo kaliya waxa ay labada dhinac u soo jiideysaa caajis .
Waxa ay shumis.net ku leedahay aqristoow in kalsoonida ka mid tahay wax yaabaha ay adag tahay in la helo ama la abuuro waana wax yaabaha ugu fudud ee la waayi karo hadaba haddii aad dooneyso in aad dhisto xariir guul ah waa in aad ilaalisaa kalsoonida qofka kale kaala dhaxeeya
3- Tix Gilinta : sidee uga hadalnaa xariir caafimaad qaba oo guul ah iyadoo aynu sheegin tiirka ugu muhiimsan ee xariirka , waa ixtiraamka , haddii ixtiraam ama tix gilin jirin xariirka waa jaban yahay waxaana ka dhalanaya wax yaabo badan oo cakirin kara hawada xariirka .
4: Is Fahanka : xariirka guuleysta waxaa qasab ah in laga helo labada dhinac is fahan aad u sareeya waan furaha keena dareemidda deganaasho iyo raaxo , ogoow qof waliba waxa uu u baahan yahay qof uu fahmo kuna dareemo deganaan
Dumarka ugu Hinaasaha Badan Aduunka oo la ogaaday halka ay ku nool yihiin Iyo Qaabka Maseryka U Qeybsamo